ओलीलाई नै चक्मा दिंदै प्रचण्ड र देउवाबिच भयो फेरी यस्तो गोप्य वार्ता, नेताकार्यकर्ता दंग — Sanchar Kendra
ओलीलाई नै चक्मा दिंदै प्रचण्ड र देउवाबिच भयो फेरी यस्तो गोप्य वार्ता, नेताकार्यकर्ता दंग
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रवार आज विहान प्रचण्ड र देउवाबीच करिब आधा घन्टा छलफल भएको हो । प्रचण्ड देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ‘वित्त सम्मेलनमा’ सहभागी हुन धनगढी जानु अघि प्रचण्ड देउवा निवास पुगेका थिए । प्रचण्ड र देउवाबीचको छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार दुई नेताले करिब आधा घन्टा छलफल गरेका थिए । यो भेट शिष्टाचार भेट भएको लेखकको भनाइ छ । ‘नेकपाले प्रचण्डलाई पार्टी हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिएपछि उहाँले सत्ता–प्रतिपक्षबीच शिष्टाचार निर्माणका लागि भेट गर्न चाहनुभएको जस्तो देखियो’ लेखकले भने । देउवाले पनि दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी जिम्मा पाएकोमा बधाई दिएका थिए । देउवाले नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे समेत प्रचण्डसँग जानकारी लिएका थिए ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १० दिन अस्पतालमा उपचार गराउँदा २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका निर्देशक डा. उत्तमकृष्ण श्रेष्ठको अनुसार शल्यक्रिया, आईसीयू बेड र औषधि उपचारमा २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । यो अस्पतालमा प्रधानमन्त्रीलाई १० दिन आईसीयूमा राखिएको थियो । यहाँ आईसीयू बेडको एक दिनको शुल्क १२ सय ५० रुपैयाँ छ । डा. श्रेष्ठले भने, ‘हामीले एकमुस्ट रकम हिसाब गरेर यो खर्च निकालेका हौं । उहाँलाई सामान्य नागरिकसरहकै शुल्क लिइएको हो ।’ १० दिनअघि एपेण्डिसाइटिसको अप्रेसन गरेका प्रम ओली १० दिनपछि आज डिस्चार्ज भएका हुन् ।
गत वर्ष छातीमा ‘इन्फेक्सन’ भएर ५ दिन मनमोहन सेन्टर बस्दा साढे २५ हजार रुपैयाँ लागेको थियो । निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘यो पटक अप्रेसन गरेको भएकाले उपचार खर्च बढेको हो ।’ उपचारमा संग्लग्न एक चिकित्सकका अनुसार प्रम ओली अस्पतालको सेवा सुविधाप्रति खुशी भएका छन् । अस्पतालबाट बाहिरिँदा हात हल्लाउँदै निस्केका प्रम ओलीले अस्पतालका चिकित्सकलाई धन्यवादसमेत दिए। उनी निस्किदै गर्दा भने, ‘यो अस्पतालमा उपचार गर्न पाउँदा म धेरै खुशी छु। म ठीक भएर फर्केको छु।’ चिकित्सकका अनुसार अप्रेसन गरेको बाहिरी घाउ निको भए पनि भित्री घाउ निको हुन केही समय लाग्नेछ । हिँडडुल गर्न तथा धेरै उठबस नगर्न प्रम ओलीलाई चिकित्सकहरुले सल्लाह दिएका छन् । उपचारमा संग्लग्न एक चिकित्सकले भने, ‘अब उहाँ नियमित काम गर्न सक्नु हुनेछ । तर, अप्रेसनको घाउ बल्झिन सक्ने भएकाले आरामको जरुरत धेरै छ ।’
सन् २०१३ देखि निजी चिकित्सकका रुपमा काम गरिरहेकी डाक्टर दिव्या सिंह प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाको भित्री जानकार हुन्। उनका अनुसार शल्यक्रियाको घाउ निको हुने क्रममा छ। उच्च रक्तचाप र मधुमेह सन्तुलनमा छ । मिर्गौलाको ‘ट्रयाक लेभल भेरिफिकेशन’, यूरिन, प्रेसर, सुगर लगायत नियमित परीक्षण भइरहेको छ । रिपोर्टमा समस्या देखिनासाथ उपचार सुरु भइहाल्छ। सोही कारण प्रम ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर डराउनु पर्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछिन्। नियमित औषधि सेवन र केही दिन धपेडी कम गर्नासाथ ओली नियमित कार्यमा फर्कन सक्ने बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘उहाँ स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनुहुन्छ। काममा व्यस्त भए पनि खाना र औषधि समयमै लिनुहुन्छ । महत्वपूर्ण छलफल र बैठक हुँदा बीचमै औषधि खानुहुन्छ। आत्मविश्वास पनि उच्च छ।’
सिंहका अनुसार उमेर बढ्दै गएपछि सामान्यतया मानिस थकित हुन्छ । सुगर, प्रेसर लगायतका औषधि खानुपर्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्ने भएकाले सामान्य कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । उनी भन्छिन्, ‘उहाँ त्यो हिसाबले बिरामी हो। अरुभन्दा बढी आराम र हेरचाहको जरुरत पर्छ तर, औषधिकै भरमा मात्रै बाँच्नु भएको भने होइन ।’ केही समययता प्रम ओलीको दोस्रो प्रत्यारोपण गराउने समेत चर्चा चल्दै आएको छ । दोस्रो प्रत्यारोपणको बारेमा सल्लाह भइरहेको भएपनि कहाँ कसरी गर्ने बारेमा तय भइनसकेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘विदेशका केही अस्पतालमा सल्लाह भइरहेपनि प्रत्यारोपणको तय भइसकेको छैन ।’